Umjolo wakuFacebook uholele ekudlwengulweni kowesimame | News24
Umjolo wakuFacebook uholele ekudlwengulweni kowesimame
Johannesburg - Umjolo oqale enkundleni yezokuxhumana uFacebook ube nesiphetho esingesihle kowesimame waseSoweto, kubika iSowetanLive.
Le ntokazi eneminyaka engu-25 ubudala enezingane ezimbili yaqala umjolo nowesilisa bexoxa nge-inbox ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokuhlaselwa kwakhe.
Ithi yathathwa yindlela lo mlisa ayeyishela ngayo ukuthi uyayithanda, baze bavumelana ngokuhlangana enxanxatheleni yezitolo, iJabulani Mall ngoLwesine.
“Ngesikhathi engithumela imilayezo, wangitshela ukuthi uyangithanda, kodwa futhi ushadile. Ngamtshela ukuthi angithandani nabantu abashadile, wathi akunankinga kungcono sibe ngabangani, ngavuma nami,” kusho lo wesimame.
Uthi bashintshana ngezinombolo nalo wesilisa baze bahlela nokuhlangana.
“Wafika ngemoto yohlobo lwe-Chery enombala osalamula, futhi wayeseminiyakeni eko-40 ubudala, mude, unempandla kanye nentshebe eshefiwe.
“Wacela ukungithengela isidlo sasemini wabe esethi uzongihambisa ekhaya,” kuqhubeka yena.
OLUNYE UDABA:Baphanyekwa ezinkundleni zokuxhumana obaba bezingane abangondli
Uthi esikhundleni sokuba amhambise kubo, lo mlisa wahamba naye wamyisa esikhotheni esiseProtea.
“Ngesikhathi edlula ngasekhaya ngamtshela ukuthi akangishiye kubo kamngani wami eNaledi kodwa akafunanga, waqhubeka nokushayela.
“Ubelokhu ezixoxela nje engenankinga futhi nami kangizange ngisole ukuthi ngizodlwengulwa, ngesikhathi ngimubuza ukuthi siyaphi, ungitshele ukuthi kukhona into afuna ukuyithenga eLenesia uzongibuyisa,” kuqhubeka yena.
Uthi lo mlisa wabe esepaka imoto imoto ngaphansi kwesihlahla ngasepulazini ethi ufuna ukuphumula ngoba kudala eshayela futhi kuyashisa.
Le ntokazi ithi besahleli kanjalo, kwakhala ucingo lwayo, yaphuma yayoluphendulela ngaphansi kwesihlahla, le ndoda yayilandela, yayibhangqa nesihlahla.
Lo wesifazane uqhuba ngokuthi le ndoda yabe isimdonsa ngezinwele yayomfaka emotweni ngaphambili yamlalisa khona yase iyamdlwengula.
Uma iqeda, uthi le ndoda yathatha ucingo lwakhe kanye nesikhwama sakhe yakulahla, ngaphambi kokumlaxaza esigangeni.
Uthi uhambe ihora lonke ukuze afike emgwaqeni omkhulu lapho athole khona usizo kubasebenzi bakahulumeni abebehamba ngemoto.
Okhulumela amaphoyisa uKhalipha Mvula uthe akukaboshwa muntu ngalesi sigameko.